Dib u dhac ku timid booqashadii wafdiga Ra’iisulwasaaraha ku tagi lahaa dhuusa mareeb – STAR FM SOMALIA
Dib u dhac ku timid booqashadii wafdiga Ra’iisulwasaaraha ku tagi lahaa dhuusa mareeb
Waxaa dib u dhac ku yimid safarkii maanta oo Sabti ah uu Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid ku tagi lahaa magaalada Dhuusa Mareeb ee Gobolka Galgaduud, iyadoo warar kala duwan uu ka soo baxayo sababaha dib u dhaca keenay.
Sida ay sheegayaan wararka wafdiga Ra’iisul Wasaaraha ee tagi lahaa Dhuusa Mareeb ayaa waxaa ka mid ahaa xubno ka tirsan Golaha Wasiirada iyo Urur goboleedka IGAD, waxaana wararka qaar ay sheegayaan in Ahlusuna ay diiday in Wasiiro ka tirsan Xukuumadda ay wafdiga Ra’iisul Wasaaraha ka mid noqdaan.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in Ahlusuna ay diiday Wasiiru dowlaha Madaxtooyada Mahad Salaad inuu qeyb ka noqdo safarka.
Sidoo kale warar kale oo aanu ka helnay Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegaya in dib u dhaca ku yimid uu la xiriiro arrimo farsamo, isla markaana diyaaradii qaadi laheyd maanta ay dib u dhacday.
Wararka ayaa intaa ku daraya in maalinta berri oo Axad ah Wafdiga Ra’iisul Wasaaraha ay u ambabixi doonaan degmada Dhuusa Mareeb.
Dhuusa Mareeb ayaa waxaa maanta ka jiray diyaar garow ku aadan soo dhoweynta wafdiga Ra’iisul Wasaaraha oo lagu waday inay maanta marka ay tagaan magaalada kulamo la qaataan Maamulka Culumaa’udiinka Ahlusuna.
Maamulka Ahlusuna ayaa sanadkii hore Dhuusa Mareeb uga dhawaaqay Maamul goboleed la magac baxay Gobolada Dhexe, kaasoo sida muuqata ka hor-jeeda Maamulka kale ee Galmudug ee dhismihiisu ay horay u qaadacday Ahlusuna.
Ciidamo ka tirsan Ahlusuna iyo kuwa dowladda ayaa sanadkii la soo dhaafay ku dagaalamay degmooyinka Dhuusa Mareeb iyo Guriceel, waxaana ugu dambeyn degmooyinkaas gacan ku heyntooda la wareegay Ciidamada Ahlusuna.
Dowladda Soomaaliya iyo Ahlusuna ayaa waxaa ka dhaxeeya xurguf siyaasadeed oo la xiriirta maamulka Gobolada Dhexe, iyadoo dowladda Federaalka ay aqoonsan tahay Maamulka Galmudug.
“Xaashi Cilmi Nuur”Maxkamada gobolka Waxaa lasoo taagayaa dad ajaaniib ah oo si sharci daro ah dalka kusoo galay